ဆားတစ်ဇွန်းစာလောက် ချစ်ပါတယ်.. – BaHuTuTa
March 12, 2021 admin Lifestyle 0
တစ်ခါတုန်းက သူဌေးကြီးတစ်ဦးမှာ သမီး သုံးဦးရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဖခင် သူဌေးကြီးက သမီးသုံးဦးကို သူ့အား ဘယ်လောက်ချစ်သလဲလို့ မေးပါတယ်။ အဓိက ကတော့ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ အမွေတွေကိုခွဲပေးဖို့ပါဘဲ..
ပထမသမီးက သူ့ကို လမင်းကြီးလောက်ချစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒုတိယသမီးက သူ့ကို နေမင်းကြီးလောက်ချစ်ပါတယ်တဲ့… အငယ်ဆုံး သမီးလေးကတော့ ဖခင်ကြီးကို ဆားတစ်ဇွန်းစာလောက် ချစ်ပါတယ်…လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအခါ ဖခင်ကြီးက သူ့ကို တကယ်ချစ်တဲ့ သမီးကြီး နဲ့ သမီးလတ်ကို အမွေ အများဆုံးခွဲဝေပေးခဲ့ပြီး ဆားတစ်ဇွန်းစာသာချစ်သော သမီးငယ်ကိုတော့ အနည်းဆုံးဝေစုကိုသာ အမွေပေးခဲ့ပါတယ်။ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အမွေတွေအားလုံးကို ခွဲဝေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူဌေးကြီးဟာ သူ့သမီးတွေဆီကို အလှည့်ကျသွားရောက် လည်ပတ်လို့ နေပါတော့တယ်။ သမီးတွေလည်း အိမ်ထောင်ရက်သားများကျလို့ သားသမီးတွေလည်း ထွန်းကားကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ သမီးကြီး နဲ့ သမီးလတ်ဟာ ဖခင်လာရောက်တာကို မကြည်ဖြူကြတော့ပါဘူး။ အလုပ်ပိုကြီး တစ်ခု ပိုလာတယ်လို့ မြင်လာပါတယ်။ ဖခင်ကြီးကလည်း သူ့ကိုပိုချစ်တဲ့ သမီးနှစ်ယောက်ဆီကိုဘဲ အများဆုံးသွားရောက်နေတာကိုး.. နောက်ဆုံးမျာတော့ သူ့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ဟာ သူ့ကို နှင်လွှတ်တဲ့အထိ ဖြစ်လာတော့တာပါဘဲ။
သူဌေးကြီးလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ သူ့သမီးငယ်ဆီ ရောက်လာပါတယ်။ သမီးငယ်က သူ့ကို ခရီးဦးကြိုဆိုပြီး.. စားဖွယ် သောက်ဖွယ်များ ကျွေးမွေးပါတယ်။ သူလည်း ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ စားတဲ့အခါမှာ ဟင်းတွေအားလုံးဟာ ပေါ့ရွှတ်လို့နေပါတယ်။ ဒီတော့မှ သမီးငယ်လေးက ဖခင်အား “ဆားမပါသောဟင်းဟာ ဘယ်လိုပင်ကောင်းကောင်း အရသာမရှိပါဘူး.. ပြီးတော့ ဆားလေးတစ်ဇွန်းဆိုပေမယ့် အထဲမှာ ဆားပွင့်လေးပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားပါတယ်။ သမီးက အဖေ့ကို အဲ့ဒီ့ဆားပွင့်လေးတွေလောက် မရေမတွက်နိုင်အောင်ချစ်တာပါ….” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်…ပြီးတော့မှ ဆားထည့်ပြီး ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းလျှာများကို လဲလှည်ပြီး ဖခင်ကြီးအား သက်ဆုံးတိုင် ပြုစုစောင့်ရှောက်သွားပါတော့တယ်….
ဆားလေးတစ်ဇွန်းဟာ ဟင်းလျှာများရဲ့အရသာကို ပြည့်စုံစေသလို…. ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာတရားဟာလည်း လောကရဲ့ အရသာကို ပြီးပြည့်စုံစေပါတယ်။